Sidee loo kordhiyaa iibka Amazon oo noqda iibiyaha ugu fiican?
Maalmaheenna, Amazon waa dunida ugu weyn ee aduunka ee internetka ah halkaas oo aad ka heli karto alaabooyinka dhadhanka oo dhan. Mashruucani wuxuu siiyaa fursado fiican labada iibiyeyaasha iyo iibiyaasha saddexaad. Haddii aad leedahay hab xeeladaysan horumarka ganacsigaaga, Amazon ayaa ku ammaanaya dakhliga sare iyo TOP dhibcaha - company network setup.
Mawduucyada moobiilka ee Amazon waxay sii wadaan inay kor u kacaan maalin kasta, iyagoo soo jiidanaya macaamiisha daacadnimo leh oo aad u badan. Sida laga soo xigtay xogta tirakoobka, ugu yaraan $ 88,000 ayaa la bixiyaa daqiiqad kasta caalamka oo dhan. Dukaameeydu waxay soo jiidaan Amazon oo ah meel ay ka heli karaan wax walba, xataa in ka badan Google. Google weli waa ilo qiimo leh, laakiin macluumaadka, ma aha cilmi baarayaasha wax soo saarka.
Dhammaan wixii la sheegay, waxaan u maleynayaa inay fikrad fiican noqon doonto inaan kula wadaagno talooyin ku saabsan sidii loo kordhin lahaa iibka Amazon iyo hagaajinta booskaaga darajadaada. Sidaa daraadeed, bal aynu eegno talooyinkan iyo khiyaamada la taaban karo. Aminada lagu kordhinayo iibka Amazon
Abuuri natiijooyinka wanaagsan ee Amazon
Awoodda dib u eegista macaamiisha ee Amazon lama dhimi karo. Waxay leeyihiin saameyn asaasi ah oo ku saabsan darajadaada liisankaaga bogga natiijooyinka raadinta ee Amazon oo wax ka beddeli kara ama burburin kara dadaalkaaga wax-qabadka. Marka la eego tirakoobyada warshadaha dhowaan, 88% macaamiishu waxay sheegaan in ay ku kalsoon yihiin dib u eegista internetka sida badan talooyinka shakhsi ahaaneed iyo inay sameeyaan go'aankooda iibsiga ku saleysan lambarka iyo tayada dib u eegista dhow iyo qiimeynta xiddigaha.
Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad sameyso dhamaanba inta ugu fiican si aad u keento dib u eegida tayada iyo dabiiciga ah ee alaabtaada. Dib u eegista muuqaalka fiidiyowga ama sawirrada ayaa laga yaabaa in ay ka shaqeeyaan mucjiso. Sidaa darteed, ku dhiirrigeli macaamiisha joogtada ah in ay ka tagaan dib u eegis dheer oo sharaxan si ay uga caawiyaan dukaamada kale inay qaataan go'aan sax ah. Haddii aad taqaano dadka deegaanka ah ee ku riyaaqay alaabtaada, u tag oo weydii wixii ku saabsan dib u eegida dib u dhigista.
Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in Amazon ay si firfircoon uga careysiiso kuwa aan nooleyn ama, si kale loo dhigo, dib u eegis lagu dhiirigeliyo. Taasi waa sababta aad u baahan tahay si loo hubiyo in dhammaan dib u eegidaada alaabta la abuuro si siman oo u eeg dabiiciga ah.
Si aad u maamusho dhammaan waxyaabaha dib u eegistaada oo aad mar walba ka warqabto fikrado diidmo ah, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka cilmi baaris gaar ah ujeedadan. Tusaale ahaan, Fikradaha Shan Wax-Qalabka wuxuu gacan ka geysan doonaa kordhinta qiyaasta jawaab celinta la soo gudbiyey isla markiiba waxay ku falcelinaysaa jawaabaha xun.
Ka shaqeynaya naqshadeyntaada iyo hagaajinta liiskaaga
Amazon darajada taxanaha waxay tixgelinaysaa ma aha oo kaliya dib u eegida alaabta, qiimaha iibka, iyo qiimaha, laakiin sidoo kale habka sida liiska liiska loo abaabulay. Sida Google, waxaad u baahan tahay istaraatiijiyad ahaan inaad ku jirto shuruudaha raadinta ee la raadinayo ee cinwaanka, dhibcaha qoraalka, iyo sharaxaadda. Amazon waxay siisaa ganacsatada leh fursad ay ku dhejiso cinwaanka sheyga leh shuruudaha raadinta ee ku habboon iyo ereyo sharaxaad leh. Nidaamka Aazon ee liiska soo-saarka wuxuu ka duwan yahay Google halkaas oo aad u baahan tahay inaad leedahay cinwaan gaaban oo sax ah oo kaliya hal erey raadin oo lagu beegsanayo. Si kastaba ha noqotee, Amazon waxay dooneysaa in ay fududeyso geedi socodka baaritaanka labada labbo iyo isticmaalayaasha, iyaga oo siinaya sharax alaab cad oo markasta. Amazon ayaa soo jeedineysa in lagu daro sifooyinka wax soo saar ee soo socda ee cinwaanka: calaamad, sharax, khariidadda alaabta, qalabka, midabka, cabbirka, iyo tirada. Si kastaba ha ahaatee, uma baahna in lagu daro qiimaha iyo joornaalada xayeysiiska ee ku qoran astaantaada si aad uga dhigto dukaamada inay xoogga saaraan macluumaadka asaasiga ah.
Si aad u heshid shuruudaha ugu muhiimsan ee la raadin karo ee liiskaaga, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho qalabka Amazon Keyword, kaas oo adeegsanaya adeega Amazon ee adeegga autocomplete si aad u hesho ereyo muhiim ah. Waxaa intaa dheer, adoo isticmaalaya qalabkani, waxaad qiimeyn kartaa mugga raadinta ee erey kasta oo la doortay.
Siyaabaha lagu guuleysto sanduuqa iibka ee Amazon
Amazon waa goob raadin tartan tartiib tartiib ah halkaas oo aad u noqotid iibiyaha ugu wanaagsan ama ku guuleysta Box Buy; waxaad u baahan tahay inaad haysato taariikhda iibka wanaagsan iyo siyaasad tartan tartan ah. Amazon ma bixiso shuruudo adag oo ku saabsan sida loogu guuleysto Box Buy, laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo loo yaqaan in lagu saameeyo awoodaada ku guuleysiga.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad kordhiso u-qalmitaankaaga Suuqa Shirkadda. Si aad sidaas u yeelatid, waa inaad haysataa xisaab iibiye xirfadle ah oo aad ganacsigaaga u iibsatid ugu yaraan saddex bilood. Siyaabo kale sida aad u hagaajin karto waa adigoo adeegsanaya adeegyo Amazon ah.
Waxaa intaa dheer, si aad u guuleysatid Amazon Buy Box, waa in aad leedahay heer heer sare ah. Heerka waxqabadka sare waxaa saameyn ku yeelan kara arrimahan sida tariikhda iibinta guuleysiga, adeega macaamiisha oo aad u fiican, cabbirrada macaamilka ee fiican, iyo tayada adeegyada tayada.
Fikrad gaar ah waa in la siiyaa qiimahaada dhulka (qiimaha rasmiga ah ee iibka ah ee bixinta lacag bixinta). Si aad uhesho tartan dhinaca naftaada ah, waa inaad sameysid falanqaynta suuqa ama waxaad isticmaashaa qalabka digniinta gaarka ah sida FeedVisitor ama Teikametricks. Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad si toos ah ula socoto sicirka alaabooyinka la xiriira ee ku jira suuqa xorta ah. Isticmaalidda qalabkaan, waxaad awoodi doontaa inaad sameyso isbeddel kasta oo loo baahan yahay oo ku saabsan siyaasaddaada sicirka mar kasta oo aad aragto qof ku siinaya qiime hooseeya markaa.
Lacagta Cinwaanka Click on Amazon
Haddii aad jeclaan lahayd in aad ku kordhiso faa'iidada on Amazon, isku day Abuse barnaamijka Amazon sponsored. Waxay kaa caawin doontaa inaad muujiso alaabtaada ka hooseysa natiijooyinka raadinta, tiirarka midigta ama bogagga faahfaahsan. Amazon PPC waa hab wanaagsan oo loogu talagalay ganacsatada internetka si ay u iibsadaan booska TOP ee natiijooyinka raadinta ee Amazon. Marka la eego barnaamijkan, ganacsade waa inuu bixiyaa mar kasta oo macaamiishu ku xayeysiiso xayeysiiskiisa natiijooyinka raadinta. Nidaamka tartanka aadka u tartamaya ee aad tafaariiqda ku leedahay, qiimaha sare ee guji waxaad u baahan doontaa inaad bixiso.
Adeegyada suuq-geynta ee Amazon platform
Hababka noocan oo kale ah ee macaamiisha ah sida wicitaanada tooska ah iyo suuqgeynta emailka ayaa mamnuuc ah Amazon. Si kastaba ha ahaatee, macnaheedu maaha inaadan isticmaali karin farsamooyinka kale ee xayeysiiska ah si aad u soo jiito dukaamada aad ku iibsaneysid dukaanka Amazon. Waxaad isticmaali kartaa boostada blogka iyo suuq-geynta warbaahinta bulshada si loo gaaro tan. Waxaa intaa dheer, waxaad abuuri kartaa bartaada la xidhiidha ganacsigaaga. Mashruucyada sida Quora, Hubpages, iyo Go Goals ayaa sidoo kale ah meel aad u wanaagsan oo aad ku qorto qaybaha mawduuca ku saabsan mawduucaaga, halkaasoo aad ka bixi karto xidhiidh ku yaal dukaanka Amazon.